Yesu Kyerɛɛ Asomafo no Ahobrɛase Wɔ Twam no Ase | Yesu Asetena
YESU NE ASOMAFO NO DII TWAM AFAHYƐ A ƐTWA TO
ƆHOHOROO ASOMAFO NO NAN HO DE YƐƐ ADESUADE MAA WƆN
Yesu somaa Petro ne Yohane maa wɔdii kan kɔɔ Yerusalem kɔyɛɛ Twam afahyɛ no ho ntotoe. Ɛno akyi no, Yesu ne asomafo du a aka no nso tĩĩ wɔn. Yesu ne wɔn resian Ngo Bepɔ no akɔ Yerusalem no, na esum reba. Ná Yesu rensan nkɔ Ngo Bepɔ no so bio kɔsi sɛ ɔbɛwu asɔre.
Bere a wɔduu Yerusalem no, wɔde wɔn ani kyerɛɛ baabi a wɔbɛdi Twam afahyɛ no. Ná efie no yɛ abansoro, enti wɔforo kɔɔ ɛdan kɛseɛ bi mu wɔ soro, na wɔhuu sɛ wɔasiesie hɔ kamakama retwɛn wɔn. Ná Yesu rehwɛ saa da yi kwan enti ɔkaa sɛ: “Mepɛ paa sɛ me ne mo bɛdi twam yi ansa na mahunu amane.”—Luka 22:15.
Kane no, sɛ wɔredi Twam afahyɛ no a, na wɔmfa kuruwa a nsa wom mfa obiara anim, nanso akyiri yi deɛ, wɔfirii ase yɛɛ saa. Enti Yesu gyee kuruwa no baako bɔɔ mpae, na ɔkaa sɛ: “Monnye yei na momfa mma obiara; na mese mo sɛ, ɛfiri nnɛ rekorɔ no merennom bobesa bio kɔsi sɛ Onyankopɔn ahennie bɛba.” (Luka 22:17, 18) Ná wei nyinaa kyerɛ sɛ Yesu wuo abɛn.
Wɔgu so redi Twam no ara, biribi sii. Yesu sɔree, na ɔyɛɛ biribi a obiara nhwɛ kwan. Ɔyii n’atade nguguso guu hɔ faa mpopaho, na ɔsaa nsuo guu ade mu. Saa bere no, sɛ obi nya hɔho a, na ɔhwɛ ma wɔhohoro ɔhɔho no nan ho. Ɛbɛyɛ sɛ nkoa na na wɔtaa ma wɔyɛ saa adwuma no. (Luka 7:44) Afahyɛ no ase deɛ, na Yesu ne asomafo no nko ara na ɛwɔ hɔ, enti Yesu na ɔyɛɛ saa adwuma no. Anka asomafo no baako bɛtumi ayɛ saa adwuma no, nanso wɔn nyinaa yii wɔn ani. Mpaninie ho akasakasa a na akɔ so wɔ wɔn ntam no nti na na obiara mpɛ sɛ ɔbɛyɛ saa adwuma no anaa? Yɛnnim deɛ, nanso Yesu fii ase hohoroo wɔn nan ho no, wɔn ani wui.
Bere a Yesu duu Petro so no, Petro kaa sɛ: “Worenhohoro me nan ho da.” Yesu buaa no sɛ: “Sɛ manhohoro wo nan ho a, wonni kyɛfa biara me mu.” Ntɛm ara na Petro kaa sɛ: “Awurade, ɛnyɛ me nan ho nko, na mmom me nsa ho ne me tirim nso ka ho.” Ɛbɛyɛ sɛ asɛm a afei Yesu kae no yɛɛ no nwonwa. Ɔkaa sɛ: “Deɛ wadwareɛ no, ɛnhia no hwee sɛ ne nan ho a ɔbɛhohoro, ɛfiri sɛ ne ho nyinaa afi. Mo ho afi, nanso ɛnyɛ mo nyinaa.”—Yohane 13:8-10.
Yesu hohoroo asomafo 12 no nyinaa nan ho; Yuda Iskariot mpo, ɔhohoroo ne nan ho bi. Yesu wiei no, ɔhyɛɛ n’atade nguguso kɔtenaa pono no ho. Afei ɔkaa sɛ: “Moahunu deɛ mayɛ mo yi? Mofrɛ me ‘Ɔkyerɛkyerɛfoɔ’ ne ‘Awurade,’ na ɛyɛ ne kwan so sɛ moka saa, ɛfiri sɛ meyɛ saa. Na sɛ me a meyɛ Awurade ne Ɔkyerɛkyerɛfoɔ ahohoro mo nan ho a, ɛsɛ sɛ mo nso mo mu biara hohoro ne yɔnko nan ho. Na magya mo nhwɛsodeɛ sɛ sɛdeɛ mayɛ mo no, mo nso monyɛ saa ara. Nokorɛ, nokorɛ, mese mo sɛ, akoa nsene ne wura, na saa ara na deɛ wɔasoma no nsene onii a ɔsomaa no no. Sɛ monim yeinom na moyɛ a, mo ani bɛgye.”—Yohane 13:12-17.
Nea Yesu yɛe no yɛ ahobrɛase ho adesuade kɛse! Wama n’akyidifo ahu sɛ ɛnsɛ sɛ wɔhwehwɛ mpaninie na wɔhwɛ kwan sɛ afoforo bɛsom wɔn. Mmom, ɛsɛ sɛ wɔsuasua Yesu. Ɛno nso nkyerɛ sɛ wɔsɔre a na wɔrehohoro nkurɔfo nan ho kɛkɛ. Nea ɛkyerɛ ne sɛ ɛsɛ sɛ wɔnya ahobrɛase na wɔsom obiara.
Bere a Yesu ne asomafo no redi Twam afahyɛ no, dɛn na ɔka de kyerɛɛ sɛ ne wuo abɛn?
Adɛn nti na ɛyɛ nwonwa sɛ Yesu mmom na ɔhohoroo asomafo no nan ho?
Asomafo no nan ho a Yesu hohoroe no, adesuade bɛn na ɛwom?
Petro—Osuaa Bɔne Fafiri Fii Ne Wura Hɔ